ဆောင်းဦးမှာမစားလိုက်မိရင် နောက်တရသွားမယ့်အစားအစာများ - JAPO Japanese News
လာ 26 Oct 2020, 12:53 ညနေ
Autumn of taste လို့တောင်လူသိများတဲ့ ရာသီ
ဂျပန်မှာတော့ နွေဦး၊ နွေရာသီ၊ ဆောင်းဦး၊ ဆောင်းရာသီ စတဲ့ဥတု ၄ မျိုးရှိတဲ့အထဲကမှာ ယခုကျရောက်တဲ့ရာသီဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဦးကအရာသာရှိတဲ့အစားအစာတွေအများဆုံးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီရဲ့အပူဒဏ်ကြောင့် အစားသောက်ပျက်သွားတဲ့လူတွေလည်း၊ ဆောင်းဦးရောက်လာတဲ့အခါ အေးစိမ့်စိမ့်လေးကြောင့် နေလို့ထိုင်လို့လည်းပြန်အဆင်ပြေလာသလို နောက်ပြီး ဒီအချိန်မှာအရသာရှိတဲ့အရာတွေပေါ်လာကြောင့် diet လုပ်ဖို့စဥ်းစားနေသူတွေအဖို့ နှမြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနှမြောစရာအချိန်၊ အဲ မှားလို့ ဆောင်းရာသီရဲ့အရသာအရှိဆုံးအစားစာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ဒီရာသီမှာ အကောင်းဆုံးကတော့ စပျစ်သီးပါပဲ။
ချိုမြိန်မှုမှာ အချဥ်ဓာတ်အနည်းငယ်ပါနေတာမျိုးလေး… နောက်ပြီး အလွန်အရည်ရွှမ်းတာကြောင့်လည်း စားတဲ့အခါအရမ်းအရသာရှိပါတယ်။ Tart လုပ်စားကြည့်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ..
အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ဒိန်ခဲအချဥ်ဓာတ်နဲ့ စပျစ်သီးမှာရှိတဲ့အချိုဓာတ်ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုက အထူးကောင်းပါပဲ…
တစ်ချို့ကမာမာလေးကိုပိုကြိုက်တတ်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နည်းနည်းလေးပိုမှည့်တဲ့တည်သီးကိုကြိုက်ပါတယ်။
ရှလွတ်ရှလွတ်နဲ့ အသံမြည်အောင်စားပြီး အသက်ကိုလည်းဖြေးဖြေးရှူရင်း ဆောင်းဦးရဲ့ချိုမြိန်မှုကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ တင်ပို့ရန်အတွက်ဒီလိုအခြောက်လှန်းကြပါတယ်။ တည်သီးခြောက်ကလည်း အရမ်းကိုအရသာရှိပါတယ်။
ပုံမှန်ရောင်းလေ့ရှိတဲ့ ဂျပန်ထွက်မှိုထဲမှာ ထင်းရှူးမှို ဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Kanji နဲ့ရေးရင်တော့ “ 秋刀魚” ..
ဆောင်းဦးမှာ ရနိုင်တဲ့ ဓါးပုံသဏ္ဍာန်ငါးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ဆောင်းဦးရဲ့ ကိုယ်စားပြုတဲ့အစားအစာပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆီဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ “ 秋刀魚” ငါးကို ကင်ပြီးစားကြည့်ရအောင် ..
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်ရတဲ့ “ 秋刀魚” ငါးက အကောင်သေးပြီးအဆီဓါတ်လည်းနည်းတယ်။ နောက်ပြီး မိတဲ့အကောင်ရေလည်းနည်းတာကြောင့် ဈေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျောက်နဲ့မီးဖုတ်ထားတဲ့ ပူနွေးပြီးချိုမြိန်တဲ့ ကန်စွန်းဥ
ဒီအတိုင်းစားလည်းရသာရှိပေမဲ့၊ ထောပတ်များများနဲ့စားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒါကို ကျောက်နဲ့မီးဖုတ်ပြီးစားလည်း အရသာရှိပါတယ်။
Dashi နဲ့အတူ ထမင်းထဲမှာထည့်ချက်မယ်ဆိုရင် ထမင်းရောသစ်အယ်သီးရော စားရတာစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေမှာပါ။
Mont Blanc (モンブラン) ဆိုရင်ရော?
ဆောင်းဦးမှာ အခြားသောအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ ကိုရိုနာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ပေမဲ့၊ လာမယ့်နှစ်ကတော့ သေချာပေါက် Momiji အရွက်တွေနဲ့အတူ အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေရဲ့ ဂျပန်ရဲ့ဆောင်းဦးကိုဖြတ်သန်းကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်….
ချိုချိုလေးနဲ့ အရသာရှိတဲ့ Fruit sandwich
နောက်ဆုံးတော့ Takoyaki လည်းမိုက်လာပြီ !